- भक्तपुर सिपाडोलका केदार थापा ५५ वर्षपछि घर फर्किए
भक्तपुरः घर छोडेर सम्पर्कबिहीन भएको ५५ वर्षपछि एक वृद्ध घर फर्केका छन् । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा भारत गएका सुर्यबिनायक नगरपालिका–८ सिपाडोलका केदार थापा ५५ वर्षपछि घर फर्केका हुन् ।
उनी वि.सं. २०२१ सालमा भारत गएका र यहि फागुन २६ गते घर फर्किएका हुन् । विवाह गरेको ७ महिनामा श्रीमती र आँखा नदेख्ने बाबु आमालाई छाडेर गुमनाम भएका थिए ।
वि.सं. १९९७ साल असार ८ गते शुक्रबार गते आफ्नो जन्ममिति भएको बताउने थापा आफ्नो दाजु गोबर्धन थापा (हाल उनको मृत्यु भइसकेको) सँग भारत हुँदै भुटानसम्म पुगेको बताउँछन् । दाजु बीचमा बिरामी भएर नेपाल फर्के भने आफू चाहिं उतै बसेको उनले बताए ।
आमाबुबाको मृत्यु हुँदा समेत उनी घर आएका थिएनन् ।
बिहे गरेको ७ महिना मै श्रीमानले घर छाडेर बेपत्ता भएपछि केवल मनभरी सम्झना र आँखाभरी आँसु बोकेर ५५ वर्षसम्म उसैको बाटो हरेर बस्नु सामान्य कुरा थिएन । नारी महान हुन्छन् र उनीहरु जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सक्दछन् भन्ने हिराको यो जीवनले पनि प्रष्ट देखाउँछ ।
आफूहरुले माया मारीसकेको परिवारको सदस्य एक्कासी लामो समय पछि फर्किँदा खुसी लागेको उनको भतिजा विश्वराम थापाले बताए । उनले भने, ‘लामो समय पछि आफ्नो जन्मस्थान र परिवार सम्झेर आउनु खुसीको कुरा हो ।’
केदारसँगै उनकाे दोस्रो श्रीमतीको जेठा सुपुत्र पनि साथमै आएका छन् । ४८ वर्ष उमेर पुगेको बताउने उनले बाबुको इच्छा नभएकै कारण अहिलेसम्म नेपाल नआएको र पछिल्लो समय विराटागर आएको समयमा पशुपति दर्शन गर्ने जाने उद्देश्यले यहाँ आएको बताए । उनले बाबुको इच्छा नेपालमै बस्ने भएका आफूहरु पनि यतै आउने बताए ।
उनको घरमा अहिले आफन्त र छरछिमेकीको भिड छ भने उनका बारेमा गाइगुईसमेत चल्न थालेका छन् । कसैले सम्पत्ती देखेर आयो, कसैले बल्ल पहिलो बुढिको माया लागेछ भन्दै अडकल काटेका छन् । जे होस् यो थापा परिवारमा एक किसिमको खुसी छाएको हामीले पायौं, जो ५५ वर्षपछि छुटिएको सम्बन्ध जोडिएको छ ।
प्रकाशित मितिः बिहीबार, फागुन २९, १०:४१